Indawo yokuthula phakathi kwepaki yemvelo nolwandle, indlu ihlanganisa ubuhle bendlu enkulu yesitayela samakoloni, kanye nokunethezeka kwanamuhla. Konke kwenziwa ukushajwa kabusha amabhethri akho, ingadi eshisayo, ithala lezinkuni langaphandle elibheke ekushoneni kwelanga, izinkundla zebhola, ichibi likasawoti elinemibhede yelanga, umbhede waseBalinese. Uzototoswa ekuseni ngenkathi ujabulela, phambi kwechibi, isidlo sasekuseni esinikezwayo, esilungiselelwe ukunakwa kwakho ngumgcini wendlu. E-villa yonke into ilungiselelwe ukunethezeka kwakho.
Ama-suites angu-4 afakwe imibhede ye-King Size kanye nemibhede engu-2 yokugcina ku-120cm (usayizi omncane wabantu abangu-2) wonke ane-air conditioning namafeni, ngakho abantu bangakhetha. Imibhede emi-2 eyengeziwe ingafakwa kuma-suites ahlala abazali, ukuze indlu ikwazi ukuhlalisa abantu abayi-12.
Endlini yokuphumula kukhona imidlalo yebhodi, ibhokisi lokuphepha nendawo yokucima ukoma eneketela nesiqandisi. Kwelinye lama-suites aphansi kunedeski, i-TV esebenza ne-DVD player, nesisefo sesibili.
Kukhona i-inthanethi. Ukuze kulondolozwe imvelo ichibi liwusawoti, kanye ne-solar water heater, nokho esimweni sezulu esibi i-heater yamanzi kagesi ithatha indawo yokunethezeka kwabahlali.
Ithule kodwa iseduze ne-Natural Park, i-Crab Market kanye ne-Kep Beach.
Kuso sonke isikhathi sokuhlala, onogada ababili banakekela indawo kanye nedamu lokubhukuda. Indlu, imibhede kanye nesidlo sasekuseni balungiselelwa yibona, kodwa abahlinzeki ngezitsha zokunye ukudla. Bahlale bemamatheka futhi bewusizo. Sihlala sitholakala futhi kubavakashi bethu uma kudingeka. Kungenzeka ukuthi ukudla kulethwe ku-villa.
Ekhaya uzothola incwajana enalo lonke ulwazi oludingekayo.
Kuso sonke isikhathi sokuhlala, onogada ababili banakekela indawo kanye nedamu lokubhukuda. Indlu, imibhede kanye nesidlo sasekuseni balungiselelwa yibona, kodwa abahlinzeki ngezit…